प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अार्थिक विषयमा केन्द्रित हुने – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अार्थिक विषयमा केन्द्रित हुने
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अार्थिक विषयमा केन्द्रित हुने
१४ चैत्र २०७४, बुधबार १६:०१
काठमाण्डौ, १४ चैत्र । नेकपा एमालेका नेता डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा आर्थिक विषयमा विशेष कुराकानी हुने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता भट्टराईले नेपालमा लगानी गर्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले थोरै विषयमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने गरी भारतसंग कुरा गर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणमा आपसी हितका विषयमा विशेष महत्वका साथ कुरा हुने विश्वास दिलाए ।
नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डा तय गर्न अहिले आन्तरिक गृहकार्यसमेत सुरु भैसकेको जनाए । उनले चीन र भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा लगानीको विषयमा विशेष कुरा हुने बताए । श्रेष्ठले नेपालमा समृद्धिको कुरा धेरै सुनिएपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा त्यो सम्भव हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
साक्षात्कारमा पूर्वराजदूत एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा लगानीको विषयमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी भन्ने कुरा पानीजस्तै भएकोले आगामी दिनमा नेपालले उद्योग, कलकारखाना खोल्नको लागि र सञ्चालनको लागि कम्प्युटराईज्ड गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।